Dowladda Masar oo ka hadashay muhiimadda uu u leeyahay saldhigga milateri ee Imaaraadka ku leeyahay Berbera – Balcad.com Teyteyleey
Dowladda Masar oo ka hadashay muhiimadda uu u leeyahay saldhigga milateri ee Imaaraadka ku leeyahay Berbera
Dowladaha Khaliijka ee hoggaaminayo Sacuudiga ayaa bilaabay inay Xukuumadda Qadar ku cadaadiyaan inay aqbasho heshiis dhowr qodob ka kooban oo ay shuruud uga dhigeen xayiraadda ay dalkaasi ku soo rogeen.
Janaraal ka tirsan ciidamada Milateriga Dowladda Masar oo u waramayay wargeyska Zamannews ee ka soo baxa dalkaasi ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda saldhigga Milateri ee Imaaraadka Carabta ku leeyihiin magaalada Berbera.
Gen. Axmed Nuuru-diin ayaa sheegay inay ka dowlad ahaan qeyb ka yihiin saldhiga magaalada Berbera, isla markaana dhowaan ay geynayaan ciidamo iyo qalab milateri kaasi oo gacan ka geysanayaan dhismaha saldhigga.
Sidoo kale Sarkaalkaan ayaa sheegay in saldhigga Imaaraadka ee magaalada Berbera ay ka ilaalinayaan maslaxadda dalkiisa ee Baabul-Mandab loogana hortegayo dalalka Qadar, Israa’iil iyo Turkiga.
Dhinaca kale Dowladda Sacuudiga oo iyadu hor kaceysa isbaheysiga ka dhanka ah Qadar ayaa muddo 48-saac ah u qabatay inay jawaab ka bixiso shuruudaha la hor dhigay, hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda Qadar ayaa sheegay inaysan shuruudahaasi aqbali karin, lamana oga halka uu ku dambeynayo mustaqbalka dalalka Khaliijka oo iminka xaaladoodu ka sii dareyso.
The post Dowladda Masar oo ka hadashay muhiimadda uu u leeyahay saldhigga milateri ee Imaaraadka ku leeyahay Berbera appeared first on Ilwareed Online.
Imtixaanka Shahaadiga ee Soomaaliya iyo Somaliland Kaaf iyo kala Dheeri.
Daawo: Warkii ugu Danbeeyey Dalka Qatar oo Dagaal Diyaar u ah & Dhiig Daata
Waa maxay xaariirka ka dhaxeeya Safiirka Soomaaliya u fadhiya UAE magaalada Abu dhabi…
Madaxweynaha dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo is-casilay